China DTY polyester mesh maro dahaar ah oo leh meshes meshes dheeman saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huasheng
NeefsashadaDareen gacan jilicsanIn yar oo fidsan.U fiirso.
Qoyaanka qoyaanka, Ka-hortagga bakteeriyada, qaboojinta
Dharkan dahaarka ah ee DTY polyester mesh, maqaalkeena lambarka FTT10262, wuxuu leeyahay mesh dheeman ah.Tani waa maro shabag ah oo neefsanaysa oo jilicsan.Isla mar ahaantaana, sababtoo ah sifooyinka farsamada ee dunta DTY, waxay leedahay wax yar oo fidsan.
Dharka dahaarka ah ee Tricot mesh waxaa loo isticmaalaa sida dahaarka hoostooda dharka firfircoonida iyo jaakada.Dharka mesh waa neefsasho waxaana loo isticmaalaa si ay u tirtiraan dhididka jirka.Isla mar ahaantaana, dharkan mesh DTY ee leh godadka dheeman waa diiran oo waara.Waxay ku habboon tahay dahaarka dharka caadiga ah, gaaban ciyaaraha fudud, iyo walxaha kale ee dharka firaaqada.
DTY waxaa loo yaqaannaa polyester-ka la sawiray dunta textured, kaas oo kulaylka lagu daweeyay oo qalloocan.DTY polyester-ka dunta ayaa u abuuri doonta taabasho jilicsan oo raaxo leh marada isku dhafka ah ee isku dhafka ah.Dabeecadahani waxay ka dhigaan dharka DTY si ay u noqoto mid aad u fiican oo lagu daro adduunka dharka iyo dunta.Waxay ku yimaadaan midabyo iyo qaabab kala duwan.
Si loo daboolo heerarka tayada adag ee macaamiisha, dharkan mesh-ka ah waxaa soo saara mashiinadayada tolida ee casriga ah ee laga keenay Yurub.Mashiinka tolida ee xaalad wanaagsan ku jira ayaa xaqiijin doona tolida wanaagsan, mesh lebbiska ah, iyo muuqaal cad.Shaqaalaheenna khibradda leh ayaa si wanaagsan u daryeeli doona dharkan mesh-ka ah min greige mid ilaa mid dhammaystiran.Wax soo saarka dhammaan dharka mesh-ka ayaa raaci doona habab adag si loo qanciyo macaamiisheena ixtiraamka leh.
Huasheng wuxuu qaataa fiilooyinka tayada sare leh si loo hubiyo waxqabadka iyo tayada maryaha mesh-ka ee ka sarreeya heerarka warshadaha caalamiga ah.
Xakamaynta tayada adag si loo hubiyo in heerka ka faa'iidaysiga maryaha meshku uu ka weyn yahay 95%.
Huasheng waxa ay soo saartaa taxane cusub oo maro mesh ah bishiiba.
Huasheng waxay rabta inay sii waddo abuurista qiimaha ugu sarreeya ee macaamiisha.Kaliya maahan inaynu macaamiisheena siino dharka mesh-ka, laakiin sidoo kale waxaan siinaa adeeg iyo xal aad u fiican.
Iyada oo leh 16 sano oo waayo-aragnimo ah dharka mesh, Huasheng waxay si xirfad leh ugu adeegtay 40 waddan macaamiisha adduunka oo dhan.
Hore: DTY polyester ka samaysan mesh dalool
Xiga: Maro mesh-yar oo polyester ah oo loogu talagalay dharka isboortiga
Dharka Shabakadda Mesh
Maro Mesh Poly
Maro Mesh Polyester ah
Dharka Mesh Jilicsan
Nylon spandex awoodda mesh tulle
Custom 100% polyester sports shinbiraha indhaha mesh maro...
Polyester-ka mesh-ka-xidhka-dharka ah ee dharka ciyaaraha...
Dhar dheeman dheeman ah oo tayo sare leh DTY polyester ...
88% Naylon 12% korantada spandex